Sina borosy makiazy matihanina manana kalitao fatratra 12cm volo varahina ferrule mainty fikirakirana makiazy napetraka mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Borosy makiazy matihanina avo lenta 12mm kofehy vita amin'ny volo varahina ferrule mainty vita amin'ny makiazy napetraka
Ny borosy Dongshen Makeup dia manome karazana borosy makiazy - Kabuki, Foundation, & Eyeshadow Brushes; Lineran'ny lokony, borosy mena ary vovoka.
Miantsena borosy makiazy, fitaovana kosmetika ary mpangataka Dongshen hahazoana vokatra tonga lafatra. Mitadiava fitaovana hatsaran-tarehy ho an'ny tarehy, volomaso, volomaso ary maro hafa.
Ny borosinay makiazy dia manana tahony feno fahasaharana ho mora ampiasaina. Fitaovana avo lenta indrindra, volom-borona avo lenta, volo fibre Synthetic avo lenta, TSY MIASA.
Anaran'ny vokatra Borosy makiazy matihanina avo lenta 12mm kofehy vita amin'ny volo varahina ferrule mainty vita amin'ny makiazy napetraka
Fitaovana volo Volo sentetika
ara-nofo Volo sentetika + tantana hazo + ferrule varahina
【TSY MAINTSY MANAO & FENO TANORA FANAFANA VOAZAZAKA】: Ity sety ity dia misy borosy makiazy tarehy tarehy, borosy eyeshadow, borosy fanampiny. Ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fampiharana tarehy sy tarehy tarehy marefo dia eto. Izy io dia mety tsara ho an'ny mpanakanto mpanakanto vao manomboka na ho mpikirakira makiazy.
【PRUSIUM NATUREL HAIR MAKEUP BRUSHES】: malefaka kokoa, matevina ary malefaka kokoa noho ny volo mahazatra, ny volo voajanahary dia tsy mora kosehina. Tsy misy fahasosorana, tsy misy habibiana, malefaka amin'ny hoditra, mety ho an'ny hoditra mora tohina indrindra. Azo ampiasaina amin'ny hoditry ny zazakely aza. Izy io dia manome famaranana avo lenta miaraka amin'ny ranon-javatra, vovoka na fanosotra fanosotra nefa tsy misy fitrohana ny vokatra ary tsy misy raraka.
【TANANA LAVITRA MAHARITRA】: Miaraka amin'ny tahony lava dia be ny mpividy no tia azy ireo satria mora kokoa ny mitazona sy mampiasa azy ireo noho ny borosy makiazy hafa. Ny tahon'ny borosy kosmetika dia vita amin'ny firavaka avo lenta sy fitaovana vita amin'ny hazo. Tsy solafaka, mora raikitra mandritra ny fotoana maharitra. Ny volom-borona dia vita tsara amin'ny volo malefaka sy landy volo, azo antoka amin'ny fampiasana maharitra.
【VERSATILE BRUSH SET & STYLISH DESIGN】: Sarony ny habe sy ny volon'ny borosy rehetra mba sokitra sy sokitra ny tarehy amin'ny lafiny tsy misy kilema. Ny fanatrehana ny zavatra ilainao rehetra amin'ny borosy tarehy dia afaka mamantatra haingana ianao ary mahita ilay borosy mifanitsy aminy. Tonga lafatra amin'ny karazana kosmetika, fototra, crème BB, vovoka, fanafenana, fitokanana, ranoka sns.
Teo aloha: Inventory fandefasana haingana fandefasana volon'osy 11cm volon'osy pony borosy makiazy napetraka
Manaraka: Borosy makiazy matihanina mahafinaritra 13pcs tena tsara tarehy borosy makiazy vita amin'ny volon'osy vita amin'ny hazo
Kitapo borosy makiazy tsara indrindra
Kalitao tsara volomparasy 12pcs osy voajanahary ha ...
Dongshen borosy tsy misy habibiana vegan synthetic hai ...
borosy makiazy napetraka, Mametraha makiazy borosy, Faritra fiharatra, Barber Shave, Manaova borosy, Fitaovana borosy makiazy,